Download Land Of Magic - PyinSalat Kabar APK - APKPURE
Download Land Of Magic – PyinSalat Kabar APK
9.2 (2248)Games, Role Playing
Land of Magic (LOM) ဂိမ်းက မြန်မာပြည်မှာ ပထမဆုံး MMORPG (လူအများပါဝင်ပြီး အွန်လိုင်း နေရာအလိုက်ဆော့ဂိမ်း) တွေထဲက တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
Land of Magic က အွန်လိုင်းဖွင့်ဆော့ရတဲ့ မိုဘိုင်းဂိမ်းတစ်ခု ဖြစ်ရုံတင်မကပါဘူး။ မှော်ဝင်တိုင်းပြည်လေးမှာ လူသားမျိုးနွယ်တွေနဲ့ဝိညာဉ်တစ္ဆေတွေ လျှို့ဝှက်စွာနဲ့ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခဲ့ပုံတွေကိုလည်း ဖော်ဆောင်ထားပါတယ်။ လူသားမျိုးနွယ်တွေဟာ မကောင်ဆိုးရွားတွေရဲ့ကြီးစိုးဝိုင်းရံမှုကို ခံထားရပြီး အသက်ရှင်သန်ဖို့ဆိုတာ အရမ်းခက်ခဲလှတဲ့အချိန်ပေါ့။ တိုင်းပြည်ရဲ့နေရာတိုင်းမှာ အန္တရာယ်ဆိုတာ ကိန်းအောင်းတည်ရှိနေတယ်။ အခုလိုမျိုးကြမ်းကြုတ်အားကောင်းတဲ့သားရဲတွေနဲ့ မကောင်းဆိုးရွားကြီးတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ လူသားတွေဟာ ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ တည်ထောင်ခဲ့ကြတယ်။ စစ်သူရဲတွေက ရွပ်ရွပ်ချွံချွံတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတယ်။
မှော်ဆရာတွေကတော့ မီးကိုလိုရာစေတယ်။ တာအိုဝါဒီတွေက မကောင်းဆိုးရွားတွေကို ထိန်းချုပ်တယ်။ သင်ဟာလည်း သူတို့အားလုံးနဲ့အတူ နွားမိစ္ဆာရန်သူတော်ကြီးကိုတိုက်ထုတ်ပြီး မှော်ဝင်တိုင်းပြည်လေးကို ပြန်လည်သိမ်းယူရမှာပါ။ အဲဒီတော့ကစားသူအမြောက်အမြားပါဝင်ချိတ်ဆက်ဆော့ကစားနိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံး MMORPG ဂိမ်းလေးမှာ စွန့်စားခန်းဖွင့်ပြီးအတူတိုက်ပွဲဝင်လိုက်ရအောင်လား။
ရွေးချယ်ဖို့ အမျိုးအစားသုံးခု : စစ်သူရဲ, မှော်ဝိဇ္ဇာနဲ့ တာအိုဝါဒီ.
များပြားလှတဲ့စွမ်းရည်စနစ်: အမျိုးအစားတစ်ခုမှာ ကွဲပြားပြီး ခမ်းနားတဲ့စွမ်းရည်9မျိုးပါဝင်ပါတယ်.
အကန့်အသတ်မဲ့ PK တိုက်ပွဲကမ္ဘာ: Boss တွေကို စိန်ခေါ်ရင်း အကြီးမားဆုံးတိုက်ပွဲတွေမှာ တိုက်ခိုက်လိုက်ပါ
ဂိုဏ်းအုပ်စုကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါ, အတူတကွတိုက်ခိုက်ပြီး အတူတူ အနိုင်ယူလိုက်ပါ.
ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် မရပ်တန့်နိုင်လောက်အောင် လက်နက်ကို အဆင့်မြှင့်ပြီး ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလိုက်ပါ။
တကယ့် လက်တွေ့ကမ္ဘာတစ်ခုကို ညီနောင်တို့အတွက် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ အခုတော့ မြန်မာပြည်မှာ အမိုက်ဆုံး PK မှာ ပါဝင်ပြီး Land of Magic (LOM) လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်လိုက်ပါ။
Land of Magic (LOM) consists of many in the game is the first MMORPG (Burma is one of the online game play နရောအလိုကျ).
Land of Magic is an online mobile game play to open theaters extends. မှျောဝငျ ghost of the spirit and the human race before the country secretly and lived together in bringing images. The human race had been surrounded by bad bodies dominated survive is very difficult at the time. Danger is everywhere within the country exists. I particularly cruel powerful beast with the big bad bad, we were set up to crack down on human self-organization. Military police were outstandingly attack.
The magician gives the fire. Bad bad old wing control. If you are issuedabull againstafalse enemy with all of them small countries မှျောဝငျ be reclaimed. So, you can joinalot of players play the country’s first MMORPG game open adventurous Let’s fighting with.
Three types to choose: the soldiers, and the identity of Magical Arts.
One of the larger capacity system: divided intoagrand capacity9range.
The fight is limited PK: Boss challenge the world to fight the biggest fights
Twin isapractical world, has been opened for us. A cool PK Burma now, you can join in the waters of the Land of Magic (LOM) first player ဖွဈလိုကျပါ.
– Limited level 119
– Add world boss 100,109,119
Rating 9.2 ( 2248 )
Tags: download Land Of Magic - PyinSalat Kabar, download Land Of Magic - PyinSalat Kabar APK, Land Of Magic - PyinSalat Kabar, Land Of Magic - PyinSalat Kabar APK